विश्वका ४७ मुलुकमा नेपाली पश्मिना निर्यात – NepalayaNews.com
अन्तत पशुपती शर्माको ‘लुट कान्छा लुट’ गित युट्युबबाट हटाइयो, के भन्छन् पशुपति शर्मा ?
नेपाल फुटसलको अध्यक्षमा पुनःअधिकारी, पोखराका पराजुली उपाध्यक्षमा चयन
राइजिङ स्टारमा विदाई कार्यक्रम
पशुपति शर्माले गीत मार्फत सरकारलाई गतीलो झटारो प्रहार गरे (भिडियो सहित)
एकै महीनामा अमेरिकी कम्पनीलाई पौने ३ अर्ब डलर घाटा
आगोलागीबाट घाइते खत्रीको उपचारको लागी बेलायतबाट सयोग
८ असार २०७५, शुक्रबार १५:१२
असार ८, काठमाडौं । विश्वका ४७ मुलुकमा नेपाली पश्मिना निर्यात हुने गरेको छ ।सरकारले उद्योग विकासलाई प्राथमिकता दिए पश्मिना उद्योगबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घले बताएको छ । च्याङ्ग्राको रौँ पश्मिनाका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थ हो । यसलाई प्रशोधन गरी पश्मिना उत्पादन हुन्छ ।
पश्मिना उत्पादनका लागि उद्यमीले कच्चा पदार्थकारुपमा ‘पश्मिना यार्न, शिल्क यार्न, डाय्स तथा रसायन चीन, भारत र युरोपबाट आयात गर्दै आएका छन् । नेपालको पश्मिना अमेरिका, जापान तथा युरोपमा लोकप्रिय छ । नेपालमा पश्मिनाबाट सल, महिला तथा पुरुषका लागि स्वीटर, कम्बल, टी–सर्ट, स्कार्फ, पञ्जालगायत उत्पादन हुन्छ ।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिचन्द्र अर्यालले देशको आर्थिक विकासमा सघाउँदै आएको पश्मिना उद्योगलाई सरकारले टेवा दिए सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा पर्ने बताए । पश्मिनाको कारोबार सन्तोषजनक रहेको उनले बताए ।
वाणिज्य मन्त्रालयको सहयोग तथा समन्वयमा पश्मिनाको उत्पादन, आयात तथा निर्यात प्रवद्र्धन भइरहेको बताउँदै नेपालमा स्थानीयस्तरमा रू. दुई अर्ब ५० करोडको पश्मिनाजन्य वस्तुको विक्री हुने गरेको सङ्घले जानकारी दिएको छ ।
विदेशी मुलुकमा रू. दुई अर्ब बराबरको पश्मिना निर्यात हुने गरेको कार्यकारी अधिकृत अर्यालले बताए । अधिकांश पश्मिना उद्योग काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन् । रासस
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:५६
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:०५
एकै महीनामा अमेरिकी कम्पनीलाई पौने ३ अर्ब डलर घाटा ८ असार २०७५, शुक्रबार १५:१२
फागुन ४, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । सन् २०१८ को..
अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा ८ असार २०७५, शुक्रबार १५:१२
अमेरिकाबाट कानुनमा पिएचडी, नेपालमा ठगी ८ असार २०७५, शुक्रबार १५:१२